DEG-DEG: Xiriirka kubada cagta dalka Spain oo si rasmi ah u shaaciyay laacibkii ugu fiicnaa La Liga bishii December – Gool FM
(La Liga) 09 Jan 2019. Xiriirka kubada cagta dalka Spain ayaa si rasmi ah u shaaciyay laacibkii ugu fiicnaa horyaalka La Liga bishii December ee lasoo dhaafay
Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid Antoine Griezmann ayaa helay abaal marinta ciyaaryahankii ugu fiicnaa horyaalka La Liga bishii lasoo dhaafay ee December.
Xiriirka kubada cagta dalka Spain ayaa si rasmi ah u shaaciyay in laacibka reer France iyo kooxda Atletico Madrid Antoine Griezmann uu abaal marintan ku garaacay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi.
Antoine Griezmann ayaa ugu guuleystay abaal marintan, kadib markii ay kooxdiisa Atletico Madrid heshay 10 dhibcood, halka laga doonayay inay hesho 12 dhibcood 4 kulan ay ka ciyaartay kooxda ka dhisan caasimada Madrid bishii lasoo dhaafay ee December.
Griezmann ayaa dhaliyay 4 gool bishii lasoo dhaafay ee December, wuxuuna ku soo wada bilaawday dhamaan kulamada ay ciyaartay kooxda Atletico Madrid, wuxuuna sidoo kale caawiyay gool.
Atletico Madrid ayaa haatan ku jirta booska labaad ee dhanka kala sareynta horyaalka La Liga, kadib markii ay soo heleen 35 dhibcood, iyagoo ka dambeeya hogaamiyaasha Barcelona ee leh 40 dhibcood.
N'Golo Kanté oo hal arin ugu baaqay taageerayaasha kooxda Chelsea kahor kulanka soo aadan ee Tottenham